विशेष – Page5– Banking Khabar
रेखा चन्द । नेपालमा बीमा क्षेत्रको पहुँच एकदमै कम रहेको छ । बीमा पहुँचका साथसाथै बीमा शिक्षाको पनि कमी छ । तथ्यांकअनुसार, नेपालको १४.७६ प्रतिशत जनतामा मात्रै बीमा शिक्षा रहेको छ । यो तथ्यांकमा वैदेशिक रोजगारीमा गएर व्यक्तिहरुलाई पनि गणना …
बैंकिङ खबर । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राष्ट्रिय पुँजी निर्माणका लागि पुँजी परिचालन हुनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डको रजत जयन्तीको अवसरमा आयोजित क्यापिटल मार्केट एक्स्पो २०१८को उद्घाटन समारोहमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले पुँजी बजारमा धेरैभन्दा धेरै व्यक्ति सहभागी …
बैंकिङ खबर । तोकिएको समयावधि सकिसक्दा पनि आधा दर्जन वाणिज्य बैंकले अझै आठ अर्ब चुक्तापुँजी पुर्याएका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत असार मसान्तभित्रमा नै आठ अर्ब चुक्तापुँजी पुर्याउन वाणिज्य बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । पछि छ महिना समय थप …
राष्ट्रिय स्तरका १२ विकास बैंक : अधिकांशले बढाए नाफा
बैंकिङ खबर । हाल संचालनमा रहेका राष्ट्रिय स्तरका १२ वटा विकास बैंकहरुमध्ये ११ वटाले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा नाफा बढाएका छन् । लुम्बिनी विकास बैंकबाहेक सबै विकास बैंकको नाफा गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको तुलनामा बढेको छ । हेरौँ, …
विप्लब माओबादीको निशानामा ‘माइक्रोफाइनान्स’
बैंकिङ खबर । गौमुल गाउँपालिकाले लघुवित्तहरुलाई कारोबार बन्द गर्न निर्देशन दिएको विषय नसेलाउँदै मगरात स्वायत्त प्रदेश जिल्ला जन परिषद् सल्यानले स्थानीय स्तरमा रहेका विभिन्न लघुवित्त संस्थाहरुलाई कारोबार बन्द गरी जिल्ला छोड्ने आदेश दिएको छ । परिषद्ले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “घ“ …
चौतर्फी दबाबपछि माइक्रोफाइनान्स हटाउने निर्णयबाट पछि हट्यो ‘गौमुल गाउँपालिका’
राम खत्री/बैंकिङ खबर । बाजुरास्थित गौमुल गाउँपालिका अन्ततः वित्तीय संस्थाहरु बन्द गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको छ । यसअघि जसरि पनि गाउँपालिकामा संचालित तिन वटै लघवित्तीय संस्थालाई एक महिनाभित्र बन्द गर्ने निर्णय लिएको गाउँपालिकाले अब स्थानीय सहकारीलाई व्यवस्थित गर्ने नीति अख्तीयार …
बैंकिङ खबर । एक महिनाको अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुले थप २० स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गरेका छन् । फागुन महिनाभरिमा बैंकहरुले २० स्थानीय तहमा शाखा स्थापना गरी संचालनमा ल्याएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । प्रदेश नं. १मा पाँच वटा, प्रदेश …
रुपा कोइराला/बैंकिङ खबर । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नै संस्थाभित्रबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त गर्न थालेका छन् । सीईओको पद खाली भएपछि डेपुटी सीईओलाई सीईओ बनाउने प्रचलन पछिल्लो समय धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा देखिएको छ । मेगा बैंक …
बैंकिङ खबर । अनुपमा खुँजेली नेपालको बैंकिङ इतिहासमा पहिलो महिला प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बन्न सफल भएकी छिन् । उनी मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडको सीईओमा चार वर्षका लागि नियुक्त भएकी हुन् । बैंकको विहीबार गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टमा बसेको सञ्चालक समितिको वैठकले …
राम खत्री/बैंकिङ खबर – प्रदेश ७ को सरकारले सबै नागरीकको बैंक खाता, फराकीलो करको दायराका साथै आर्थिक विकास तथा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम समेटिएको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा गरिबी न्युनिकरणका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र …
विदेशबाट कर्जा ल्याउने कार्य सुरु, एनआईसी एशिया बैंकले गर्यो पहिलो सम्झौता
बैंकिङ खबर । लगानीयोग्य पुँजीको अभाव न्युनिकरणका लागि विदेशबाट कर्जा सापटी ल्याउन पाउने व्यवस्था भएसँगै एनआईसी एशिया बैंकले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बैंकले दीर्घकालीन कर्जा लिने दिने सम्बन्धमा आईएफसीसँग कर्जा सम्झौतापत्र आदानप्रदान गरेको छ । विदेशबाट कर्जा सापटी ल्याउनका …
सात करोड भारु कागजका खोस्टासरह
बैंकिङ खबर । बैकिङ प्रणालीमा ठुला दरका (५ सय र १ हजार) ७ करोड भारु कागजका खोस्टा सरह भएका छन् । भारु नोटमा प्रतिबन्ध लागेको एक वर्षभन्दा बढी हुँदा समेत सटही हुने कुनै संकेत छैन । प्रतिबन्ध लागेका ती ठुला …